High expectations ... Higher Education minister Oppah Muchinguri
The facility, housed in University of Zimbabwe, was provided by China's leading personal computer and server manufacturer Inspur Group with a 5.5 million U.S. dollars interest-free loan committed by the Chinese government.
The supercomputer is expected to be used in agriculture, weather forecast, mining, gene technology, and stimulation, enabling Zimbabwe's scientific research to make a great leap forward for the next five to ten years, said Huang Gang, deputy president of Inspur Group.
"If used properly and extensively, the supercomputer can bring fundamental changes to Zimbabwe –enabling sophisticated researches to be conducted and becoming a hub for training cloud computing experts in Africa," Huang said. "Its contribution to national development can't be rivaled by the building of government offices and roads, the mainstream Chinese-aid projects."
Chinese Ambassador to Zimbabwe Lin Lin said the commission of the high performance computing center, enabling Zimbabwe to become the fourth country in Africa to own such a facility, is an important part of China-Zimbabwe cooperation that "both sides should be proud of."
Zimbabwe's Minister of High Education Oppah Muchinguri said as a country, Zimbabwe has high expectations on the nation's future in the area of computation science and engineering, which will provide new and emerging technology that is fundament for social and economic transformation.